Nidaamka Fariimaha iswada ee ugufiican PMSes
Features » Fariin otomaatig ah
La socodsii macluumaadka saxda ah waqtiga ku habboon martidaada si ay uga dhex muuqdaan tartanka.
Milkiilayaasha kirada fasaxa iyo maamulayaasha shirkadaha guryaha la kireysto ayaa ahmiyad weyn siinaya isgaarsiinta ay la leeyihiin martida ballansanaya inay joogaan fasaxyadooda fasaxa ama guryaha kale. Isla mar ahaantaana, ganacsiyada martigelinta waxay la yimaadaan hawlo fara badan, sidaa darteed otomaatigga waxaa loogu yeeraa meel kasta oo suurtagal ah.
Mar haddii buugaagta martida ay noqoto mid daallan in lagu qasbo in gacanta lagu soo diro isla macluumaadka, kaliya xitaa jawaab la helin. Tani waxay badanaa u baahan tahay inay la socoto SMS loo diro martida si ay u soo jiitaan dareenkooda. Hoos u dhigida habka ballansashada iyo joogitaanka martida, tiro macluumaad ah ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in loo gudbiyo martida. Isla mar ahaantaana, waa muhiim in xasaasiyo gaar ah sida furaha marin-u-helka, aan la dirin haddii aan la hubin dhammaan hubinta lagama maarmaanka ah iyo in maaliyaddu si buuxda loo caddeeyo. Adiga oo gacan ku raad raaca dhammaan xaaladahan si sax ah martida ku ballansanaya kanaallo badan ayaa u dhow wax aan macquul aheyn wada-hawlgalayaasha.
Sidee ayuu Zeevou fariintiisa otomaatiga ahi u caawin karaa?
Kooxdayada Zeevou waxay soo saareen dhowr astaamo si ay uga caawiyaan fududeynta iyo otomatiga isgaarsiinta martida. Marti-geliye kasta oo iska diiwaangeliya Zeevou waxaa la siiyaa dhowr sheybaarayaal ah oo loogu talagalay qodobbada kala duwan ee safarka martida. Mawduucyadani dhammaantood way jiidayaan brandCalaamadda iyo macluumaadka xiriirka, waxayna leeyihiin naqshad HTML qurux badan. Waxaa intaa dheer, waad tafatiri kartaa ama isku dhajin kartaa tusaalooyinkan, ama waxaad ka abuuri kartaa kuwo gebi ahaanba cusub xoq.
Kaliya maaheyn kartid qaabeynta, laakiin sidoo kale waxaad dejin kartaa xeerarka kicinta gaarka ah. Sharci kasta oo kiciya waxaad ku qeexi kartaa inta xaaladood ee aad jeceshahay oo u baahan in la buuxiyo ka hor inta aan la shidin. Waxa kale oo aad ku dari kartaa lifaaq leh qaanuunka kicinta, sida shaabad guri, hage soo-galid ama qaansheegta martida.
Ogeysiisyada ayaa sidoo kale loo guurin karaa xubnaha shaqaalaha ama cinwaanada emaylka ee saddexaad. Ka sokow awood u lahaanshaha otomaatiga emaylka sidan, isdhexgalka Zeevou iyo Guji sidoo kale waxay u oggolaaneysaa martida inay otomaatiga fariimaha qoraalka ah ee SMS-ka ah martida iyo shaqaalaha. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa SMS si loogu diro martida waqtiga ballansashada si aad uga codsato inay fiiriyaan emaylladooda, ama u ogeysiiyaan shaqaalaha guryaha cusub oo nadiif ah haddii aysan isticmaalin app mobile in aan u diyaarinay nadaafada, ama xitaa u sheegno shaqaalaha soo galaya mar martida ay leeyihiin xaqiijiyay waqtiga imaanshahooda nidaamka si ay ugu aadaan guriga si ay ugu oggolaadaan.